रंगीन खबर – Samaj Khabar
कम्युनिष्ट सरकारको दबावमा पशुपतिको गीत युट्युबबाट हटाइयो !
काठमाडौं । चर्चित गायक पशुपति शर्माले युट्युवबाट आफ्नो गित हटाएका छन् । अपलोड गरिएको केही समयमै चर्चा कमाएको लुट्न सके लुट बोलको गीत युट्युबबाट हटाएका हुन् । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले गीतका केही शब्दका बारेमा विवाद गर्न खोजिएको जनाएका छन् । उनले आफूलाई गीतको शब्द हटाउन सुझाव आएको बताएपनि कसको....पुरा पढ्नुहोस
बेहुला–बेहुली बने संजोग र वर्षा
काठमाडौं- अभिनेत्री वर्षा राउत र अभिनेता संजोग कोइराला वैवाहिक बन्धनमा बाधिएका छन् । प्रेमजोडीको महत्वपूर्ण दिन मानिने ‘भ्यालेन्टाइन डे’को अवसर पारेर विगत सात वर्षदेखि प्रेममा रहेको यो जोडीले बिहीबार विवाह गरेको हो । काठमाडौंको पाँचतारे होटल ¥याडिसनमा दुवैतर्फका परिवारको उपस्थितिमा हिन्दू....पुरा पढ्नुहोस
गल्ली बोय समीक्षा : टाइट कथा, उम्दा अभिनय
फिल्मको कथा मुम्बईको धारावीमा रहेको एक चालबाट शुरू हुन्छ । मुराद (रणवीर सिंह) गरीबी र सामाजिक बहिष्कार झेलिरहेको एक युवक हुन् । उनले ठूलो र्‍यापर बन्ने सपना देखिरहेका छन् । मुराद एक उत्साही युवती सैफीना (आलिया भट्ट) सँग प्रेम गर्छन् । मुरादको जिन्दगीमा परिवर्तन आउने घटना तब आउँछ जब उसले एमसी शेर....पुरा पढ्नुहोस
बर्षा र सन्जोगले गरे ‘इन्गेजमेन्ट’
काठमाडौं । अभिनेत्री बर्षा राउत र सन्जोग कोइरालाले इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । फ्रेब्रुअरी १४ मा विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेका वर्षा र सन्जोगले विवाहको केही दिन अघि सोमबार इन्गेजमेन्ट गरेका हुन् । उनीहरुले पारिवारिक सदस्यको उपस्थितिमा ‘इन्गेजमेन्ट गरेका हुन्। यी दुइले करिब ७ वर्षदेखिको प्रेमलाई....पुरा पढ्नुहोस
यस्तो बन्यो ए मेरो हजुर ३ को टिजर (भिडियो)
काठमाडौैं । सुपरस्टार अनमोल केसी र सुहाना थापा स्टारर यस वर्षको प्रतिक्षीत फिल्म मध्येको एक ‘ए मेरो हजुर ३’ को अफिसियल टिजर रिलिज भएको छ । बसन्त पञ्चमीको अवसर पारेर निर्माण टिमले फिल्मको टिजर रिलिज गरेको हो । टिजरमा अनमोललाई 'मेगास्टार' सम्बोधन गरिएको छ । अनमोल र सुहानाको प्रेम कथा रहेको फिल्मको....पुरा पढ्नुहोस
किमको बलिउड अवतार यस्तो !
एजेन्सी । अमेरिकी सोसलाइट किम कार्दसियनकी भारतीय संस्करण मानिने बलिउड एक्ट्रेस गिजेल ठकरालका हट एन्ड बोल्ड तस्बिर यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा छन् । रियालिटी टिभी सो ‘बिग बोस ९’ मा सहभागी हुँदा पनि उनले आफ्ना ग्ल्यामरस तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेर नै चर्चित भएकी थिइन् । बलिउडको ‘मस्तीजादे’....पुरा पढ्नुहोस
हङकङमा ‘एभरेष्ट इन्टरनेशनल फिल्म २०१९’ हुने
काठमाडौं । नेपाली फिल्मलाई प्रवर्धनका गर्ने उद्देश्यले हङकङमा नेपाली फिल्म अवार्ड हुने भएको छ । सन् २०१९ को जुन महिनामा ‘एभरेष्ट इन्टरनेशनल फिल्म २०१९’ हुने भएको हो । आयोजक संस्था एभरेस्ट इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले आज (बुधवार) काठमाडौंमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी अवार्डबारे जानकारी....पुरा पढ्नुहोस
गायक शर्मा भन्छन् – निष्कासनको जानकारी छैन
काठमाडौं । जनवादी गायक जीवन शर्माले आफूलाई मसालले ६ महिनामा निलम्बन गरेको बारेमा आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालले उनलाई अल्पमत भएको पार्टीलाई सहयोग गरेको भन्दै पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । उनलाई पार्टीको हितविपरीत....पुरा पढ्नुहोस
लोकदोहोरी प्रतिष्ठानबाट अलग्गिएको बसन्तको घोषणा
२३ माघ, काठमाडौं । नेपाल आइडल रवि ओडले आफ्नो गीत खराब तरिकाले गाएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका संगीतकार बसन्त थापाले अन्ततः लोक दोहोरी प्रतिष्ठानबाटै अलग भएको घोषणा गरेका छन् । यो विवादमा प्रतिष्ठानले मौन रहेको भन्दै उनले यो घोषणा गरेका हुन् । बसन्तले सोमबार राति अबेर फेसबुकमा दुई बुँदे स्टाटस....पुरा पढ्नुहोस
‘डन’ देखि ‘गली ब्वाय’ सम्मका थुप्रै सुपरहिट फिल्मकाे अफर छोडेका थिए रणबिर कपूरले
बलिउड अभिनेता रणबिर कपूरले बक्स अफिसमा जति पनि ब्लकबस्टर फिल्म दिएका छन् त्यति नै ब्लकबस्टर फिल्महरु लत्याएका पनि छन् । रणबिर कपूरले फिल्मको अफर आए पनि अभिनय गर्न अस्विकार गरेका फिल्महरुको सूची ‘डन’ देखि सुरु भएर ‘गली ब्वाय’ सम्मको छ । रणबिर स्वयंले यि फिल्महरु मध्येका केही फिल्म नगरेकोमा पछुतो....पुरा पढ्नुहोस